विवादको गाँठो फुक्यो, कसरी गठन हुन्छ राष्ट्रियसभा ? – News Portal of Global Nepali
विवादको गाँठो फुक्यो, कसरी गठन हुन्छ राष्ट्रियसभा ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै राष्ट्रियसभा निर्वाचनको बाटो खुलेको छ । अध्यादेश जारी भएसँगै प्रमुख दलहरुबीच पछिल्लो समयमा पेचिलो बन्दै गएको निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी विवादको राजनीतिक गाँठो फुकेको छ । यसअघि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको पूर्ण मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न अप्ठ्यारो पर्ने जनाएको थियो । सोही कारण संघीय व्यवस्थापिका र नयाँ सरकारको गठनमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग यसबारेमा केही दिनदेखि छुट्टाछुट्टै परामर्श गरी अन्ततः आजै संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम उक्त अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्नुभएको हो ।